सार्वजनिक यातायातको भाडादर घट्यो-पूर्ण विवरणसहित ~ Khabardari.com
सार्वजनिक यातायातको भाडादर घट्यो-पूर्ण विवरणसहित
सार्वजनिक भाडादर साढे एकदेखि सवा ५ प्रतिशतसम्म घटेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रलायले सोमबार स्वीकृत गरे अनुसार पछिल्लो पटक इन्धनमा घटेको मुल्य अनुसार भाडा दरपनि समायोजन गरिएको यातायात विभागले जनाएको छ ।
यसअघि रहेको भाडादर डिजेलको रु. ९२ र पेट्रोलको रु. १२३ रुपैयाँ रहेको बेला निर्धारण गरिएको उल्लेख गर्दै हाल डिजेलको रु. ८६.५० र पेट्रोलको रु. १०९ रुपैयाँ रहेकोले त्यसै अनुरुप समायोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । भाडादर घटाउँदा भाडादरमा ६५ प्रतिशत योगदान मान्ने गरिएको छ ।
पछिल्लो पटक २०७१ पुस ९ गते निर्धारण भएकोमा यात्रुवहाक सवारीमा २.०३ र सार्वजनिक मालवाहक सवारी साधन ट्रकमा तराईको हकमा ५.२८ तथा पहाड तर्फ नारायणगढ–पोखरा तथा नारायणगढ– काठमाडौंमा ४.३७ प्रतिशत घटाइएको छ । त्यसैगरी मिटर जडित ट्याक्सी तथा त्रिभूवन विमानस्थबाट चल्ने पर्यटकीय सवारी साधनमा १.४२ प्रतिशत भाडा घटाइएको छ ।
कहाँको कति भाडादर पूर्णा विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्